Ii-FAQs-Ningbo Yourlite Lighting Co., Ltd.
Ngaba ungumenzi okanye inkampani yokurhweba?
Siyingcali kwishishini lokuvelisa izibane e-China.Siye saseka umzi-mveliso waseYusing ogubungela indawo engama-78,000 square metres ngo-2002, engumboneleli weemveliso zokukhanyisa zobungcali.
Ingakanani ubungakanani kunye nommandla wenkampani yakho?
Umzi-mveliso wethu ophethwe ngokupheleleyo-iYusing, uthatha indawo ye-78,000 square metres.Okwangoku, sinabasebenzi abangaphezu kwama-800, kwaye sinemigca yemveliso engama-21 yokuvelisa abathengi.
Ziziphi iimveliso zakho eziphambili?Kwaye yeyiphi imigca yemveliso onayo?
Iimveliso zethu eziphambili zizibane ze-LED, izibane zezikhukula, izibane zestrip, izibane zephaneli, njalo njalo.
Sinemigca emininzi yokuvelisa, kubandakanywa umgca wokuvelisa ii-bulbs, umgca wokuvelisa izibane zokhukula, umgca wokuvelisa izibane, njalo njalo.Umzi-mveliso wethu unokuvelisa izibane ezisisigidi esi-1, iiglowubhu ezizizigidi ezisi-8 kunye nezibane zesikhukula ezingama-400,000 ngenyanga.
Zeziphi iimarike zakho eziphambili?
Iimveliso zethu zithunyelwa kumazwe angaphezu kwama-60 kunye nemimandla eYurophu, eOstreliya, eMntla Melika, eMzantsi Melika, kuMbindi Mpuma njalo njalo, ngokuphumelela ukuthembela kunye nenkxaso yabathengi bethu kwihlabathi liphela.
Bangaphi abaxhasi abasebenzisanayo onabo?
Siye saseka ubudlelwane bentsebenziswano bexesha elide kunye nozinzo kunye nababoneleli abangaphezu kwama-200, kwaye sikhonza abathengi be-1280 kwihlabathi jikelele.Sikwanayo nentsebenziswano esondeleyo kunye Philips, FERON, LEDVANCE kunye nezinye iinkampani ezaziwayo-kakuhle.
Ngaba ubonelela ngeenkonzo ze-OEM/ODM?
Sineqela le-R&D lobuchwephesha elijolise kuyilo, ubunjineli, i-elektroniki, i-optics, ukusetyenzwa kunye nezisombululo zokukhanyisa, ukuze sikwazi ukubonelela ngeenkonzo ze-OEM kunye ne-ODM.
Bangaphi abasebenzi be-R&D onabo?
Sinabasebenzi be-R&D abangama-45.Iqela le-R&D yobuchwephesha sisitshixo sempumelelo eqhubekayo ye-Youlite.Sihlakulela izakhono eziphezulu, iitalente zobuchwephesha, siseka amaqela afanelekileyo acebisayo e-R&D, sincamathisele ukubaluleka kotyalo-mali lwe-R&D, kwaye sigxile kubuchule obutsha nophuculo.Sityale imali eninzi kwi-R&D ukuphuhlisa iiglowubhu ze-LED ezikumgangatho ophezulu, izibane zesikhukula, izibane zephaneli kunye nezinye iintlobo zeemveliso zokukhanyisa.
Ingaba unayo iNgxelo yoHlolo loMgangatho weFactory?
Ewe sakwenza njalo.Siye saluphumelela uhlolo lwe-TUV kunye ne-Intertek, kwaye saseka ubudlelwane belabhoratri yentsebenziswano neTUV.
Zeziphi izatifikethi onazo?
Siphumelele i-ISO9001 kunye ne-BSCI yophicotho lwesiqinisekiso senkqubo yolawulo lomgangatho, kwaye iimveliso zethu ziqinisekisiwe ngemigangatho yengingqi engaphezulu kwama-20 efana ne-CE, GS, SAA, Inmetro, kunye ne-UL.
Ngokuqhelekileyo ixesha lokuhambisa lijikeleze iintsuku ezingama-40-60.Kwaye izinto ezahlukeneyo zinexesha elahlukileyo lokuhambisa.
Kutheni ukhetha i-Yourlite?
· Sineminyaka engama-20+ yamava ekuthumeleni ngaphandle.
· Isebe leR&D liyazamkela iiprojekthi zakho zeOEM.
· Isebe loyilo lwepro lenza ukuba ushicilelo lwakho kunye nokupakisha kube lula kwaye kubuchwephesha.
· Isebe le-QC elineenjineli ezingama-25 zilawula ukuthunyelwa kwempahla yakho ngokwemigangatho yakho.
· Iilebhu ezi-6 zeemvavanyo ezingama-30.
· Ukubonelela ngeenkonzo zokugcina abathengi basekhaya nabangaphandle ukonga iindleko ezinkulu.
Sihlala sinikela ingqalelo kwiimfuno zabathengi, sizame ukuphucula amava omthengi, kwaye sibambe onke amathuba anokwenzeka entsebenziswano.
Isibane sangaphandle seDonga, Camping yangaphandle Solar Led Ligh, Isibane sangaphandle soKhukula, UkuKhanya kweNtendelezo, Ukukhanya kwangaphandle okukhokelela, Izibane zangaphandle&Inkundla,